PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-12-06 - Ithe zava emalini iBanyana Banyana
Ithe zava emalini iBanyana Banyana
Isolezwe lesiXhosa - 2018-12-06 - EZEMIDLALO - PEDRO MAPELO
NANGONA abadlali beqela lesizwe lamantombazana liwe phantsi ngomzuzu wokugqibela – kodwa bamkelwe njengamaqhawe ngabalandeli bebhola naziinkokheli zelizwe.
IBanyana Banyana igaleleke ngeCawe egqithileyo kwisikhululo seenqwelomoya esikhulu eMzantsi Afrika (O.R.Tambo International Airport) emva kokubethwa ngo’4-3 kumapenela yiNigeria emdlalweni weWomen’s Afcon ebisingathwe lilizwe laseGhana.
Kubekho ukuphoxeka kubalandeli – kodwa baye baphinda baxoliswa yindlela abadlali boMzantsi Afrika abadlale ngayo kwitumente yebhola ekhatywayo yamanenekazi kwizwekazi leAfrika.
Nangona iintokazi zoMzantsi Afrika bezigxeleshe indebe – kodwa imisila isephezulu emva kokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi eza kube iseFrance okokuqala kwimbali yebhola yamanenekazi.
Bathe zava emalini abadlali beBanyana Banyana emva kokwamkelwa ngemali engaphaya kwezigidi ezibini zeerandi ziinkokheli zeSafa noMphathiswa wezeMidlalo kwilizwe lonke uMama uTokozile Xasa njengomvuzo womsebenzi omhle abawenzileyo eGhana futhi ikwayindlela yokubakhuthaza njengokuba kusondela indebe yehlabathi.
Bonke abadlali babelene kanye ngendlela ekuvunyelenwe ngayo phambi kokuya eGhana ngemali eyiR2 415 000.00 ephume kubaxhasi abakhulu bebhola yamanenekazi iSASOL neLotto emva kwesankxwe esenziwe ngabalandeli bebhola ngokubhatalwa kancinci kwabadlali beBanyana Banyana noxa umsebenzi wabo umhle ebaleni.
Ukapteni weBanyana Banyana, uJanine van Wyk, oncame ukudlala eMelika kuba ebefuna ukuqinisekisa ukuba iqela lakhe liyaya kwindebe yehlabathi, uphoxekile kukubethwa yiNigeria – kodwa kwangaxeshanye uthe uyamgcobisa umsebenzi omhle owenziwe liqela lakhe.
“Siphoxekile ngokuba besifuna ukuyibamba ngezandla zethu indebe. Siyazingca kodwa ezintliziyweni zethu ngenxa yendlela esidlale ngayo kwitumente yonke. Siya kwindebe yehlabathi (eFrance) – apho sifuna ukubonisa ukuba iAfrika iyakhula futhi inayo italente,” utshilo uVan Wyk.